Wariye Raaxo Abshir Nuur oo gurigeeda caawa lagu weeraray – Kismaayo24 News Agency
Wariye Raaxo Abshir Nuur oo gurigeeda caawa lagu weeraray
by admin 10th January 2018 21st January 2018 077
Xilli danbe oo ah habeenimo ayaa waxaa bom lagu soo weeraray guriga Wariye Raaxo Abshir Nuur , oo ahaa nooca gacanta laga tuuro, iyaddoona dhawaqa bomkaasi ay wada maqlayeen deriska .
Weerarkan oo daba socda weeraro baryahan ay kooxda Al-Shabaab ku heysay Raaxo Abshir Nuur , oo si weyn uga soo horjeeda kooxda Al-Shabaab ayaan geysan wax khasaaro nafeyd ah, marka laga reebo inuu burbur gaarsiiyey qeybo ka mid ah daarada guriga.
Waxaana si bad qab ah guriga looga soo saaray Raaxo Abshir Nuur , ninkeeda Feysal Raage Wardheere iyo wiilkooda Maxamed Feysal Raage, iyagoo argagaxsan oo ku sasay weerarka lagu soo qaaday xilliga habeenimo, oo aysan wanaagsaneyn isku socodka Muqdisho.
Kooxda Al-Shabaab oo horey u sheegtay inay dili doonaan wariye Raaxo Abshir Nuur ,sidoo kalana weerar bishii sideedaad ee sanadkii hore ku dhaawacay weerar ninkeeda Feysal, oo markaasi ay isku gaari saarnaayeen ayaa sheegtay caawana weerarka gurigooda lagu soo qaaday , iyagoona cadeeyey inay doonayeen inay isku kor dilaan iyada iyo ninkeedaba.
Ma ahan markii ugu horeeyey oo ay kooxda Al-Shabaab dadka ay u gaarsanayaan ku weeraraan guryahooda, kuwaasi oo adeegsanaya rasaas ama bambooyinka gacanta laga tuuro ee geysta khasaaraha badan.
Wariye Raaxo Abshir Nuur ,oo ah hooyo Soomaaliyeed oo ku shaqeysa duruuf adeg oo saxaafadeed, ayaa haddana waxaa maalinba maalinta ka danbeysa sii xoogeysanaya weerarka uga imaanaya kooxda xagjirka ah ee Al-Shabaab, lamana yaqaan inay sidan kusii shaqeyn karto iyo in kale.
DEG DEG: Qarax xooggan oo goordhaw ka dhacay Magaalada Muqdisho
DAAWO: Madaxweyne Gaas oo hanjabaad hawada umariyey Maamulka Hargeysa ee Somaliland
Booliska Kenya oo ay wehlyaan iyo FBI-da Mareykanka iyo kuwa UK oo galay madaraso Islaami ah oo ku taalla Magaalada….